Kudimbura Bluetooth Zvishandiso Kusvika Mangwana Pa iPhone? Iyo Kugadzirisa! - Iphone
sei kugadzirisa iphone 6 pamwe nekubata skrini
iphone isingaridze chete kudedera
ios 10 alarm isingashande
iphone nhema screen ine apple logo
Kudimbura Bluetooth Zvishandiso Kusvika Mangwana Pa iPhone? Iyo Kugadzirisa!
Wanga uchiongorora Control Center pakangoerekana iPhone yako yati iri kubvisa kubva paBluetooth accessories kusvika mangwana. Iyo yeBluetooth icon yakaenda pfumbu muDirect Center uye ikozvino hauzive zvekuita. Muchinyorwa chino, ini ndichatsanangura kuti nei iPhone yako ichiti ' Kurega maBluetooth Accessories Kusvikira Mangwana ”Ndokuratidza maitiro aunogona kubatanidzazve kune ako asina waya michina .
foni inonanga yakananga ku voicemail
Nei iPhone Yangu Ichiti 'Kudimbura Zvishongedzo zveBluetooth Kusvikira Mangwana'?
Yako iPhone inoti 'Kudimbura Bluetooth Zvishandiso Kusvika Mangwana' nekuti iwe wakadzima nyowani Bluetooth kubatana kubva kuControl Center nekukanda bhatani reBluetooth. Chikonzero chikuru nei iyi pop-up ichioneka ndeye kujekesa kuti Bluetooth haina kudzimwa zvachose, asi hauzokwanise kubatanidza kune zveBluetooth accessories. Zvisinei, iwe ucharamba uchikwanisa kushamwaridzana uye kushandisa Personal Hotspot uye Handoff pamwe neApple Penzura yako neApple Watch.
Kekutanga nguva yaunobaya bhatani reBluetooth muDirect Center, yako iPhone ichati 'Kudimbura Zvishandiso zveBluetooth Kusvikira Mangwana' uye bhatani reBluetooth rinozoita dema uye grey.
Iyi Pop-up Inoonekwa Kamwe!
Yako iPhone inongoti 'Kudimbura Zvishongedzo zveBluetooth Kusvikira Mangwana' mushure mekutanga kubaya bhatani reBluetooth muDirect Center. Mushure meizvozvo, iwe unongoona chete meseji diki kumusoro kwechiratidziro iwe paunoshandura uye kudzima Bluetooth kubva paControl Center.
iphone 6 yakanamatira pakurodha skrini
Maitiro Ekutendeuka Nyowani Bluetooth Kubatanidza Kubva Kudzoka
Kana iwe uchingoona iyo 'Kubvisa Bluetooth Yekushandisa Kusvika Mangwana' pop-up, asi iwe haudi kuve nekumirira zuva rese usati wabatanidzazve kune ako eBluetooth zvishandiso, hezvino zvishoma zvinhu iwe zvaunogona kuita:
Vhura Control Center zvakare uye tinya pane bhatani reBluetooth zvakare. Kana bhatani reBluetooth riri rebhuruu uye chena muDirect Center, iwe unozokwanisa kubatanidza kune maBluetooth michina ipapo.
Enda ku Zvirongwa zveapp -> Bluetooth , wobva wadzima Bluetooth uye kudzoka nekutepa switch iripedyo neBluetooth kumusoro kwemenyu.
Enda ku Zvirongwa zveapp -> Bluetooth uye tapira Rega maNew Connections . Mushure meizvozvo, iwe unozokwanisa kubatanidza kune ako eBluetooth michina.
iphone inoratidza apple logo ichibva yaenda nhema
Zvakanakira Kubvisa paBluetooth Midziyo
Kubatsira kukuru kwekubvisa yako iPhone kubva pamidziyo yeBluetooth kusvika mangwana ndeyekuti yako iPhone haizongoerekana yabatana nemidziyo yako yeBluetooth iwe usingade. Mimwe michina yeBluetooth inozvibatanidza otomatiki kana ivo vari mukati meiyo iPhone yako. Kuchengetedza kubatana ikoko husiku, kunyangwe iwe usiri kushandisa chishandiso cheBluetooth, kunodhonza bhatiri rayo kusvika padanho.
Kurega maBluetooth Accessories Kusvikira Mangwana: Yakatsanangurwa!
Iwe ikozvino unoziva kuti nei yako iPhone ichiti 'Kudimbura Zvishongedzo zveBluetooth Kusvikira Mangwana' uye nemabatiro aunogona kuita zvekare kuBluetooth mushure mekunge zvaitika. Ndinovimba muchagovana ichi chinyorwa pasocial media nemhuri yako neshamwari kuitira kuti ugone kuvabatsira kuti vanzwisise kuti pop-up iyi inorevei zvakare. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve iyi pop-up kana yako iPhone zvakajairika, bvunza kure muchikamu chemashoko pazasi!